Philippe Coutinho Oo Si Rasmi Ah Ugu Biiray Bayern Munich Iyo Faahfaahinta Heshiiska Uu Ku Tegay Bavaria - Jigjiga Online
HomeCiyaarahaPhilippe Coutinho Oo Si Rasmi Ah Ugu Biiray Bayern Munich Iyo Faahfaahinta Heshiiska Uu Ku Tegay Bavaria
Philippe Coutinho Oo Si Rasmi Ah Ugu Biiray Bayern Munich Iyo Faahfaahinta Heshiiska Uu Ku Tegay Bavaria
Kooxda difaacanaysa horyaalka Germany ee Bayern Munich ayaa haatan si rasmi ah u shaacisay saxeexa xiddigii kooxda Barcelona fashilka ku noqday ee Philippe Coutinho kaas oo qaab amaah ah ugu wareegay.
Barca iyo Bayern ayaa heshiis buuxa ka gaadhay arrimaha Coutinho waxaana uu baaqi ku ahaan doonaa Bavaria xilli ciyaareedkan 2019-20 iyadoo Munich ay heshiiskan ka bixinayso 8.5 Milyan iyo waliba mushaharaadka xiddiga.
Heshiiskan ayaa sidoo kale ah mid Bayern siinaya fursada ay hadhaw si rasmi ah ugula wareegi karayso Coutinho iyada oo ka bixinaysa 120 Milyan waana lacag Barca usoo celinaysa intii ka gashay 27 jirkan markii ay Liverpool kala soo wareegaysay January 2018.
Sida ay xaqiijisay Bayern Munich, Coutinho oo aad moodo inuu soo dhawayn halyeey ka helayo kooxdaas ayaa gacanta loo geliyay isla markaana la wareegaya maaliyada No.10-ka ee uu baneeyay Arjen Robben oo dhawaan kubadda cagta ka hawl-gabay.
Xiddiga ree Brazil ayaa doonaya inuu xilli ciyaareedkaas uu kusoo qaadan doono horyaalka Bundesliga dib ugu soo nooleeyo waayihiisii ciyaareed ee quruxda badnaa kaddib mudo uu bandhigiisii fiicnaa iyo farxadiiba ku waayay Camp Nou.
Coutinho oo kaddib shaacinta heshiiskiisa saxaafada u warramay ayaa yidhi “Aniga ahaan dhaqaaqistani waxay iiga dhigan tahay loolan cusub oo wadan cusub ah aniga oo jooga mid kamida kooxaha ugu wanaagsan Yurub”
“Xaqiiqdii waan rajaynayaa midan, Anigu waxaan leeyahay ujeedooyin waaweyn sida Bayern, Waan hubaa waan la samayn karaa iyaga xiddigaha cusub ee aanu isku kooxda nahay”.
Maliha Maxamed: Cunto Kariyihii Dunida Ka Yaabiyey